Pasitera Mailhol - Ambohipo - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Taorian’ny trangan-javatra niseho ny arivan’ny Asabotsy 16 Martsa 2013 lasa teo dia nisy ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety nataon’ny pasitera Mailhol. Tetsy amin’ny Motel Anosy no nanatontosana izay fihaonana tamin’ny mpanao gazety izay ny Alahady 17 Martsa 2013 lasa teo. Tamin’io fotoana io no nitondrany fanazavana mahakasika ilay savorovoro niseho teo Ambohipo, fotoana izay nahamay ny fiaran’ny FAM. Tonga nitantara ny zava-niseho ny arivan’io Asabotsy io rahateo izy mirahalahy izay voasambotra, sy ny vaomieran’ny fandriampahalemana eny Ambohipo sy Andohan’i Mandroseza.
Raha tsiahivina dia lehilahy roa no voasambotry ny mpiambina an’i pasitera Mailhol ny harivan’ny Asabotsy 16 Martsa lasa teo. Araka ny fitantaran’i Eric (isan’ny voasambotra) dia nanamboatra fiarakodia izy no nandalo ny fiara nitondra an’i pasitera Mailhol. Nisy olona nandalo hoy izy ka niteny ratsy mafy an’i pasitera, nijanona ny fiara nitondra ny mpiambina an’i pasitera ary nisambotra izay hitany ho nanao izay fihetsika izay. Nitsoaka anefa ilay olona niteny ratsy ary nandositra toy izay ihany koa izy. Vosambotra tamin’izay izy sy i Francis. Vokatr’izay dia maro ireo olona no tezitra ka nitaky ny amohana azy ireo tany antranon’i pasitera Mailhol. Marihina fa ity farany dia tsy nahafantatra ny zava-niseho satria efa lasa mialoha ny fiara nitondra azy. Tao anatin’izay ihany dia efa nandray andraikitra tamin’ny famoahana azy mirahalahy ny pasitera Mailhol, ka naka azy ireo tany amin’ny commissariat Tsaralalana, ary nametraka ny fialan-tsiny tamin’ireo vahoaka maro tonga tany antranony ihany koa.
Ny arivan’ny alahady kosa dia nihaona tamin’ireo mponina teny Ambohipo ny pasitera Mailhol mivady. Tamin’io fotoana io no nitondrany fialan-tsiny tamin’ireo vahoaka monina eo Ambohipo noho iny zava-niseho iny. Fa indrindra ihany koa, mba hanamafy orina indray ny fihavanana amin’ireo mponina manodidina. Ho fanamafisana izay fihavanana izay dia nanolotra nofon-kena mitam-pihavanana ho an’ireo mponina eny Ambohipo izy mivady. Tamin’io fotoana io ihany koa no nanararaotra naneho ny faniriany ireo tanora mpanao fanatanjahan-tena eo amin’ny fokotany Ambohipo, ary fantatra fa hanolotra fanomezana ho azy ireo ny pasitera Mailhol mivady. Taorian’ny fiaraha-mifaly tamin’ireo mponina teo Ambohipo dia nanatitra ny pasitera Mailhol mivady tany antokatranony ireo mponina. Mahakasika ilay fiara may kosa dia nambaran’i pasitera Mailhol fa tsy tokony hanimba ny fihavanana amin’ireo mponina mihitsy izany, ary izy rahateo dia nanamafy fa tsy hametraka fitoriana. Nisy ihany koa ny fepetra noraisina mahakasika ireo mpiambina nanao ny fahadisoana.
Publié dans Ireo Vaovao
Exorcisme de Andry par le Pasteur Mailhol